Xaaladda ugu dambeysay Muqdisho iyo shacabka oo argagax ka qaaday qaraxyadda – Bulshoweyn Online | Your Source Of News And Entertainment
Xaaladda ugu dambeysay Muqdisho iyo shacabka oo argagax ka qaaday qaraxyadda
Tan iyo markii magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka Soomaaliya ay kusoo kordheen qaraxyadda is-daba jooga ah ee loo adeegsanaayo gaadiidka ayaa xilligaan dadka ku nool magaalada waxay dareemayaan cabsi aad u xoogan.
Qaraxyo loo adeegsaday gawaari ayaa maalintii shalay ka dhacay magaalada Muqdisho, kuwaasi oo kala ahaa gaari noocyadda loo yaqaano Surf iyo Noha, waxaana gawaaridaasi lagu weeraray xarunta dambi baarista ciidanka booliska Soomaaliyeed ee CID-da oo ku taala inta u dhaxeeysa KM4 iyo KM5.
Shacabka ku nool magaalada Muqdisho ayaa laga dareemayaa cabsi, waxaana ay isha ku hayaan gawaarida qaarkood, inkastoo qaraxyada gaadiidka oo aanan la-garaneyn bar-tilmaameedkooda ayaa dadkaasi isku dayaya inay ka dheeraadaan xarumaha dowladda ee ku yaala magaalada Muqdisho, halkaas oo inta badan weerarada lagu qaado.
Sidoo kale, goobaha ay bulshada isugu timaado ayaa dadka waxay ka muujinayaan feejignaan dheeri ah, waxaana taasi usii dheer inay iska ilaaliyaan gawaarida aan la garanayan oo meelahaas la dhigo.
Lama oga sida ay hay’addaha amaanka ee dowladda federaalka u xakameyn doonto qaraxyadda is-daba jooga ah oo ay Al-shabaab ka geysanayaan magaalada Muqdisho.
Cabsidaan soo wajahday shacabka ku nool Muqdisho ayaa kusoo beegmaysa xilli labo qarax oo ismiidaamin ah oo 26-kii bishii hore lagu qaaday agagaarka garoonka diyaaradaha Aadan Cadde ee magaalada Muqdisho, iyo sidoo kale qaraxyadii shalay iyo xalay ka dhaceen magaalada.
Waxaa dhamaan mas’uuliyadda weeraradaasi sheegtay Xarakada Al-shabaab, kuwaas oo inta badan ku faana daadinta dhiiga shacabka Soomaaliyeed islamarkaana aanu dan iyo xaajo ka lahayn arrimahaasi oo dhan.
Si kastaba ha ahaatee, hay’addaha amaanka ayaa u muuqata mid ku fashilantay suggida ammaanka iyo ka hortagga dhagarta ay maleegayaan xubnaha ka tirsan Al-shabaab, inkastoo qaraxyo kale oo ay Al-shabaab ka geysan rabeen magaalada Muqdisho la fashiliyay.